SOLJA oo Suxufiyiinta gobolka Awdal u qabatay Aqoon isweydaarsi ku saabsan Doorka Saxaafadda ee Hanaanka Doorashooyinka + SAWIRO. |
SOLJA oo Suxufiyiinta gobolka Awdal u qabatay Aqoon isweydaarsi ku saabsan Doorka Saxaafadda ee Hanaanka Doorashooyinka + SAWIRO.
Borama(GNN) Ururka Suxufiyiinta Somaliland SOLJA ayaa Aqoon isweydaarsi ku saabsan hanaanka Doorashooyinka ugu qabatay magaaladda Borama Labaatan Suxufi oo ka kala hawl-gala Hay’adda Warbaahinta Somaliland, kuwaasoo dhamaantood ku nool Gobolka Awdal.
Sidoo kale, Aqoon isweydaarsigan waxa ka qayb galay Wakiiladda Axsaabta siyaasadda iyo kuwa Komishanka Doorashooyinka Qaranka NEC, waxaanay ka wadahadleen qaabkii ay warbaahinta iyo daneeyayaasha Doorashooyinku uga hawl-galeen Doorashooyinkii hore, iyadoo la soo bandhigay galdaloolooyinkii ka soo baxay iyo sidii loo gufayn lahaa Doorashooyinka soo socda.
Agaasimaha Guud ee Ururka SOLJA C/raxmaan Rabile ayaa u sharaxay ka soo qayb galayaashii tababarka ujeedada laga leeyahay Aqoon isweydaarsigani waxaanu soo bandhigay daraasado laga sameeye qaabka ugu haboon ee loo baahan yahay Wariyayaasha Somaliland inay uga waramaan ka hor iyo kadib ba hanaanka Doorashooyinka, isagoo ku booriyey inay daneeyayaasha Doorashooyinka oo dhami la shaqeeyaan.
Yonis Cali Nuur oo ku hadlayey Af-ka Wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland C/laahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa sheegay in Wariyayaasha looga baahan yahay inay kaalin muhiim ah ka qaadaan hanaanka doorashooyinka Somaliland, waxaanu xusay inay warbaahinta saran tahay masuuliyad culus xiliga Ololayaasha, maalinta codaynta iyo maalmaha Natiijadda la filayaba, waxaanu tilmaamay warbaahintu inay xumaan iyo samaan ba tahay ta Doorashooyinka saamaynta ku leh.
Guddoomiye ku-xigeenka Xisbiga Wadani Axmed Muumin Seed oo ka hadlay furitaankii Aqoon isweydaarsigan Hanaanka Doorashooyinka ayaa sheegay Xisbi ahaan inay soo dhaweynayaan Kaalinta ay Saxaafaddu ka qaadato Doorashooyinka, waxaanu sheegay in loo baahan yahay inay ka fogaadaan waxyaabaha horseedi kara inay ku xumaan karaan Doorashooyinku, isagoo ku dar-daaray inay dhex u noqdaan dhamaan Axsaabta ku tartamaysa.
Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Somaliland SOLJA Maxamuud Cabdi Jaamac (Xuuto) oo ka hadlay kulankaasi ayaa Suxufiyiinta ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan sidii ay ugu dar-dar galin lahaayeen dhinacyada ay khusayso inay doorashooyinka qabtaaan , isagoo tilmaamay inay muuqdaan caqabado horseedi kara inay Doorashooyinku mar kale dib u dhacaan, waxaanu tusaale usoo qaatay Xeerarka la xidhiidha Doorashooyinka ee qabyada ah, kuwaas oo horyaala Baarlamaanka.
Sidoo kale, waxa uu xusay Diiwaangalinta Cod-bixiyayaasha oo ah hawl culus oo ay Guddida Doorashooyinku gacanta ku hayaan oo u baahan in Olole culus loo sameeyo, isagoo iftiimiyey haddii ay saxaafadda Somaliland si mug leh uga waranto ama ugu wacyigaliso dhamaan daneeyayaasha ay ku xidhan yihiin hawlahaasi inay ku dhamaystirmi karaan wakhtiga loo qoondeeyey Doorashooyinku inay dalka ka qabsoomaan.
Aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo shan maalmood ah waxa maalgaliyey safaaradda Maraykanka ee Nairobi qaybteeda (U.S. Mission to Somaliya), waxaana loogu talo galay in saxaafadda lagu baro kaalinta ay ku leeyihiin hanaanka Doorashooyinka (Orientation Workshop on the Role of Media on electoral Process).